Qaylo dhaanta Abaaraha iyo Biyo la’aanta sii kordhaya iyo Geerida Aabe iyo Inantiisii | WWW.SOMALILAND.NO
Qaylo dhaanta Abaaraha iyo Biyo la’aanta sii kordhaya iyo Geerida Aabe iyo Inantiisii
Posted on Abriil 20, 2008 by Abdirisak Fadal
“Gabadha yari way soo baxsatay, haraad ayaana dilay, Aabeheed oo soo qaadayna meel dhexe ayuu ku dhacay.”
Gudoomiyaha Degmada Duruqsi
Hargeysa (sl.no)- Laba ruux oo is-dhalay, ayaa la sheegay inay harraad ugu dhinteen Degmeda Durukhsi, oo ka tirsan Gobolka Togdheer, isla markaana ka mid ah degaamada sida ba’an abaaraha iyo biyo la’aantu u saamaysay.
Guddoomiyaha Degmeda Durukhsi Axmed Cabdillaahi Gaab-yoome, oo xalay khadka talefoonka aanu kula xidhiidhnay isaga oo jooga magaalada Burco, ayaa noo xaqiijiyay geerida labadaa ruux oo la kala odhan jiray Cabdi Maxamed Cismaan iyo inantiisii Aamina Cabdi Maxamed. “Shalay (Dorraad) ayaan ka soo kicitimay Degmeda Duruqsi, oo runtii xaalado culus oo abaaro ba’ani keeneen ay ka jiraan, oo aan xamili kari waayay inaan sii joogo, isla markaana ay khasab igu noqotay inaan u soo qaylo-dhaan geeyo degaankaas oo saddex bilood biyo-dhaamis ka socday.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Duruqsi. Isaga oo ka waramayay sida ay aabahaas iyo inantiisu ugu geeriyoodeen harraadka, waxa uu yidhi, “Nin la yidhaahdo Cabdi Maxamed Cismaan, ayaa inan yar oo uu dhalay oo Aamina Cabdi Maxamed la yidhaahdo ka soo baxsatay, oo todoba jir ahi. Isaga oo raadinaya ayuu u yimi, inantii yarayd oo geed ugu dhan-qalantay harraad dartii. Ninkii maydkii inanta yar, isaga oo soo qaaday ayuu isagiina meel dhexe ku dhacay. Dabadeedna, qayla-doonka ayaa na soo gaadhay, waanu u tagnay, labadiibana iyaga oo mayd ah ayaanu u tagnay!” Mr Axmed Gaab-yoome, oo werwer badan ka muujiyay xaaladdaha nololeed ee dadka iyo duunyada degaankaas, waxa uu intaa ku daray, “Waxaan markhaati ka ahay hada wixii ka dambeeya inay xaaladu sii cuslaanayso, iyada oo wax ay xoolihii cunaan jirin, biyihiina foostadii ay marayso 100,000 Soomaali Shillin ah. Markaa gurmad deg-deg ah, ayay dadka deegaankaasi u baahan yihiin.”
“Waxa jirtay dhawaan Gurmad uu hogaaminayo Madaxweyne Ku-xigeenku oo wakiilna uu gobolka uga yahay Wasiir-ku-xigeenka Ganacsiga Cabdixaliim Maxamed Aw-Muuse. Marka aan degmeda xisaabiyo waa 22 goobood, mid aanay 4 booyadood gaadhinina ma jirto ugu yaraan, qaarna shan ayaa gaadhay. Way ku ladnaadeen dadku. Balse, muddo hadda shan maalmood laga joogo ayay abaartii soo laba-kaclaysay, waxay noqotay dhul-kaa-dheer, Cir-kaa-dheer, taasoo ku keentay xaalad culus dadkii degaanka,” ayuu hadalkiisa raaciyay Guddoomiyaha Degmeda Duruqsi Axmed Gaab-yoome. Mar aanu wax ka waydiinay sida ay biyaha xataa degmeda lafteedu u hesho iyo halka ay uga yimaadaan, waxa uu ku jawaabay, “Dee, dadka ninka wax iibsan karayaa waxa booyadaha laga soo kaxaystaa Burco. Isla markaana labada meelood ee biyaha ugu dhawi waa meel Gaashaamo (Itoobiya) ka shishaysa oo 120km u jirta iyo Burco oo 116km u jirta.” Mar aanu wax ka waydiinay xaaladda siddaas ah wax yididiilo ah oo uu ka qabo gurmad xukuumadda iyo hay’addaha toona uga yimaada, waxa uu ku jawaabay, “Haa, oo saaka (shalay) markaan Guddoomiyaha u tagay, wuxuu igu yidhi, waan cusubahay, saaka (shalay) ayaan xafiiska iigu horaysa, bal hay’adahana waan la kulmayaa, Ganacsatadana waan la kulmayaa, aniguna (guddoomiyaha duruqsi) waan u sheegay in xaaladu adag tahay, oo si deg-deg ah wax loogu baahan yahay.” Waxaanu intaa ku daray, “Waxaan aaminsanahay hadii aan wax roob ahi di’in, in intooda badan dadkaasi halis noloshoodu ku jirto.” Mar uu ka hadlayay dedaallada kale ee ay sameeyeen, wuxuu yidhi, “Saaka (shalay) dadka ka soo jeeda deegaanka waan la kulmay, si fiican ayaan ugu waramay, waxaanay yidhaahdeen berri (maanta) aynu isu-nimaadno. Anaguna maamul ahaan wixii aanu tari karaynay waanu qabanay, ilaa 10 booyadood ayaanu geynay, oo intaan booyado kaxaystay ayaan ilaa dorraad (maalin afraad) uga soo dhaamiyay Shimbiraale oo 20km Gaashaamo koonfur ka xiga, halkaas oo roobabkii da’ay biyo geliyeen, markaa gurmad deg-deg ah ayaa dadkaasi u baahan yahay.”
Dhinaca kale, dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood ayaa shalay goob fagaare ah ku tukaday Salaad Roob doon ah oo ay Eebbe kaga baryayaan in uu nimcadiisa u shubo.
« Warbixin:Saameyn intee Leeg Ayey ku Yelatay S-Land Murankan Siyasadeed WAREYSI LALA YEESHAY KOLKII UU KU GURYO NOQDAY DALKII XILDH. MAXAMED NUUR CARAALE “DUUR” OO KA MID AHAA XILDHIBAANADII GOLAHA WAKIILADA EE BOOQASHADA KU YIMID DALKA INGIRIISKA & DALAL KALE OO YURUB AH »